ပြည်တွင်း စျေးကွက်တိုင်းတာမှုများ | FLEGT
VPAs များရှိ ပြည်တွင်းဈေးကွက်အတိုင်းအတာများ
အပူပိုင်းဒေသနိုင်ငံများတွင် ပြည်တွင်းသစ်ဈေးကွက်များသည် ပြည်ပပို့သစ်ဈေးကွက်များထက် ယေဘူယျ အားဖြင့် ပိုမိုကြီးမားကျသည်။ သို့ရာတွင် ပြည်တွင်းဈေးကွက်များကို အားရလောက်အောင် ထိန်းချုပ် နိုင်ခြင်းမရှိပါ။ အသေးစားတရားမဝင်ရောင်းချသူများမှရောင်းနေသော ဈေးကွက်များသည် ရှင်းလင်းပြီး ဥပေဒေနှင့် ညီညွတ်သောအခြေအနေရှိမနေခြင်း သို့မဟုတ် တရားမဝင်ဖြစ်နေတတ်သည်။ အသေးစား တရားမဝင် ရောင်းချသူများ၏အရေအတွက်များပြားပြီး ပျံ့နှံ့နေသော သဘာဝသည် ၎င်းတို့၏ လုပ်ဆောင် ချက်များကို ထိန်းချုပ်ရခက်ခဲသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ ဤအသေးစား လုပ်ငန်းများသည် မိသားစု မြောက်များစွာအတွက် အသက်မွေးမှုကိုထောက်ပံ့ပေးထားပြီး နိုင်ငံများအတွင်းသစ်ထုတ်ကုန်လိုအပ်ချက် ကို ဖြည့်ဆည်းပေးပါသည်။
ကင်မရွန်းတွင် Center for International Forestry Research (CIFOR) ၏ လေ့လာမှုတစ်ခုအရ ပြည်တွင်းနှင့် ဒေသတွင်း ဈေးကွက်လိုအပ်ချက်အတွက် သစ်ပင်ခုတ်လှဲမှုသည် ၁၉၉၆ မှ ၂ဝ၁ဝ အကြား ၁ဝ ဆ တိုးလာခဲ့သည်။ ပြည်တွင်းသစ်ဈေးကွက်သည် လူပေါင်း ၄၅ဝဝဝ ကို အလုပ်အကိုင်ဖန်တီးပေးပြီး ၎င်းသည် ပို့ကုန်ဇောင်းပေးသည့် လုပ်ငန်းများကခန့်ထားသည့်ဝန်ထမ်းအရေအတွက်ထက် ၃ ဆ သာလွန်သည်။ တရားမဝင်ထုတ်လုပ်နေသည့် စက်လွှသုံး သစ်ခုတ်သမားများသည် ပြည်တွင်းအသုံးပြုရန် ခုတ်လှဲသည့် သစ်ပမာဏ၏ ၇၅% ခန့်ကို ထုတ်လုပ်ပါသည်။
ကင်မရွန်းနှင့် အခြားနိုင်ငံများ၏ ပြည်တွင်းသစ်ကုန်သွယ်မှု ၏တရားမဝင်ဖြစ်မှုသည် အစိုးရများကို အခွန်ဘဏ္ဍာ ဆုံးရှုံးစေပြီး ရေရှည်မတည်တံ့ခြင်းကိုဖြစ်စေသော သစ်တောပြုန်းတီးခြင်းကို ဖြစ်စေသည်။ ထို့အပြင် ပြည်တွင်းဈေးကွက်အတွက် တရားမဝင်ခုတ်လှဲလိုက်သော သစ်များနှင့် ပြည်ပပို့မည့်သစ်များ ရောနှောနေခြင်း သည် ဆန္ဒအလျောက်မိတ်ဖက်အဖြစ်ဆောင်ရွက်ရန် သဘောတူညီချက် (VPA) ပါ တရားဝင်သစ်ဖြစ်ကြောင်း အာမခံသည့်စနစ်၏ ဂုဏ်သိက္ခာကို ခြိမ်းခြောက်နေသည်။
ထို့ကြောင့် VPA အား EU နှင့် မိတ်ဖက်နိုင်ငံအကြား နိုင်ငံတကာကုန်သွယ်ရေးအတွက်သာ ရည်ရွယ်ခဲ့သော်လည်း မိတ်ဖက်နိုင်ငံအများစုသည် VPA တွင် ပြည်တွင်းဈေးကွက်ကိုပါထည့်သွင်းခဲ့ကြသည်။
ပြည်တွင်းဈေးကွက်အုပ်ချုပ်ရေးစိန်ခေါ်မှုများသည် နိုင်ငံအလိုက်ကွဲပြားသည်။ ၎င်းတို့မှာ။ ။
မပြည့်စုံသော ဥပဒေမူဘောင်သည် အသေးစားသစ်ခုတ်သူများကို တရား၀င်သစ်ရရှိစေရန် ခက်ခဲစေမှု
တင်ပို့ခြင်းနှင့် ပြည်တွင်းဈေးကွက်များအတွက် ဥပဒေနှင့်စည်းမျဉ်းများ မတူညီမှု
ပြည်တွင်းကုန်သွယ်ရေးနှင့် အသေးစား၊ အလတ်စားစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင် စာရင်းဇယားမရှိခြင်း
မရှင်းလင်းသော အချိန်ကာလကန့်သတ်၍ ငှားရမ်းခြင်း အစီအစဉ်များဖြစ်သည့် အခွင့်အရေးများအတွက် အဖွဲ့အစည်းများ၊ သစ်တောပိုင်ရှင်များနှင့်သစ်ခုတ်ခွင့် ပါမစ်ကိုင်ဆောင်သူတို့အကြား ပဋိပက္ခများ
တရားမ၀င်သော ကဏ္ဍမှ အဖွဲ့ဝင်များကြားတွင် တရား၀င်ဖြစ်လာပါက အခွန်အခကြောင့် အမြတ်ငွေနည်းပါးသွားမည်ဖြစ်သည့်အတွက် တွန့်ဆုတ်နေမှုများ
အသေးစားလုပ်ငန်းများအကြား သစ်ရွေ့ပြောင်းမှုခြေရာခံရန် စိန်ခေါ်မှုများ
အသေးစားလုပ်ငန်းရှင်များသည် အဖွဲ့အစည်းမရှိသည့်အတွက် VPA လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည့်အခါ စိန်ခေါ်မှုများ
VPA နှင့် ဆက်စပ်နေသော အခွင့်အရေးများ
VPA လုပ်ငန်းစဉ်များသည် ပြည်တွင်းကုန်စည်ဖြန့်ဖြူးရေးလမ်းကြောင်းအတွင်း အကျိုးဆက်စပ်ပတ် သက်သူများကို ပါဝင်ပတ်သက်စေခြင်း နှင့် ဥပဒေနှင့်၊ သို့မဟုတ် မူဝါဒပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ ဖော်ထုတ် ခြင်းအားဖြင့် ဤစိန်ခေါ်မှုများကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန် အခွင့်အရေးပေးပါသည်။ ယနေ့အထိ VPAs များတွင် ပါဝင်သည့် အခွင့်အရေးများမှာ။
ကင်မရွန်း၊ ဂါနာ၊ လိုင်ဘေးရီးယားတို့ကဲ့သို့ မည်သည်က တရား၀င်၊ မည်သည်က တရားမ၀င်ကို အားလုံးပါ၀င်သည့် ဥပဒေရေးရာပြန်လှန်သုံးသပ်ချက်ဖြင့် ရှင်းလင်းစေခြင်း
ကင်မရွန်းနှင့် ဂါနာကဲ့သို့ ပြည်တွင်းဈေးကွက်များအတွက် မူဝါဒအသစ်များ ချမှတ်ခြင်း
အသေးစား၊ အလတ်စားလုပ်ငန်းများကို မထိခိုက်စေရန် VPA ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကို ဘောင်သတ်မှတ်ခြင်း
အသေးစားသစ်ထုတ်လုပ်ခြင်းအတွက် အင်ဒိုနီးရှားကဲ့သို့ ရိုးရှင်းသောဥပဒေရေးရာ စည်းမျဉ်းများ ပြောင်းလဲစေခြင်း
လိုင်ဘေးရီးယားကဲ့သို့ စည်းမျဉ်းအသစ်များချမှတ်ပြီး တရားဝင်ဖြစ်မှုအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်တွင် ထည့်သွင်းကာ တရားမ၀င်ဖြစ်သည့် လွှစက်ဖြင့်သစ်ခုတ်ခြင်းကို တရား၀င်ဖြစ်အောင်လုပ်ခြင်း
မြေနှင့် သစ်ပင် သက်တမ်းကို ပိုမိုရိုးရှင်း ရှင်းလင်းစေခြင်း
ပြည်တွင်း ဈေးကွက်များကို နားလည်မှုနှင့် လေ့လာစောင့်ကြည့်ခြင်းကို တိုးမြှင့်ခြင်း
အသေးစားလုပ်ငန်းများအတွက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး၊ အသေးစားလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းစသည့် အဖွဲ့အစည်းများ၊ ဌာနအသစ်များဖွဲ့စည်းပေးခြင်း
အသေးစားနှင့် အလတ်စားလုပ်ငန်းများအတွက် သတင်းအချက်အလက်နှင့် သင်တန်းများပေးခြင်း
အများနှင့်သက်ဆိုင်သောကုန်ပစ္စည်း ဝယ်ယူမှုဆိုင်ရာမူဝါဒများနှင့် ၀ယ်လိုအားဖက်တွင် တရား၀င်မှုကို မြှင့်တင်ပေးခြင်း
အသေးစားထုတ်လုပ်သူများအား အပြစ်ပေးခြင်းထက် စိတ်တက်ကြွစေမည့် အခွန်စနစ်ကို ဖွံ့ဖြိုးစေခြင်း
အသေးစားလုပ်ငန်းရှင်များအပေါ် VPAs များ၏ သက်ရောက်မှုကို လေ့လာစောင့်ကြည့်ခြင်း
ပြည်တွင်းဈေးကွက်နှင့်ပတ်သက်သည့် အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူများ၏ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုရလဒ်များကို VPA တွင်ထည့်လိုပါကထည့်နိုင်ပါသည် သို့မဟုတ် မထည့်ဘဲလည်းနေနိုင်ပါသည်။ ခိုင်လုံသော ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုမျိုး ကို သတ်မှတ်ပြဌာန်းမည့်အစား ယနေ့အထိချုပ်ဆိုပြီးသမျှ VPAs အများစုသည် အကောင်အထည်ဖော်သည့် အဆင့်တွင် ပြည်တွင်းဈေးကွက်များနှင့်ပတ်သက်သည့် အသေးစိတ်ပြုပြင် ပြောင်းလဲမှုများကို ဖြစ်ပေါ်စေလိမ့်မည် ဟုညွန်ပြနေပါသည်။ ထို့ကြောင့် အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက် သူများအတွက် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းသည့်အဆင့်မှ အကောင်အထည်ဖော် သည့်အဆင့်သို့ အကူးအပြောင်းလုပ် ငန်းစဉ်တွင် ထိတွေ့မှုကိုထိန်းထားရန် အကျိုးဆက်စပ် ပတ်သက်သူများအတွက် အရေးကြီးသည်။
VPA မှ ကောင်းမွန်သောသစ်တောအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကို မည်ကဲ့သို့ ပိုမိုကောင်းမွန်စေနိုင်မည်နည်း။
VPA မှ ဥပဒေပြုရေးနှင့်အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ ရှင်းလင်းပြတ်သားမှုကို မည်ကဲ့သို့ တိုးမြှင့်ပေးနိုင်သနည်း။
Pye-Smith, C. 2010. Cameroon's Hidden Harvest. CIFOR. Bogor, Indonesia. 30pp. [PDF ဒေါင်းလုဒ်ရန်]